Umgca wee-PP weRaschel Line
Umgca weeBhegi zeeValve ezisezantsi zePhepha
Indlela esikhetha ngayo iingxowa ephothiweyo PP ukwenza oomatshini?
Sinabathengi abaninzi abanemibuzo emininzi xa kuthengwa oolwenziweyo beengxowa ezenziwe nge-PP. Ke sinokwenza ntoni ukunciphisa umngcipheko wokulahleka kwemali? Ngaba uthenga iingxowa kwabanye abathengisi kwaye uzithengise okanye uthenge oomatshini ukuvelisa iingxowa ngokwethu? PP iingxowa ephothiweyo ukuvelisa na intens capital ...
Ukwenza imveliso yeebhegi ze-PP xa zizonke, zihlala zifuna oomatshini abali-14, Umxhubi owomileyo, uMxhasi oZenzekelayo, uMatshini ojikelezayo weCam, Umatshini ojikelezayo weSetyhula, uLawulo lweKhompyuter Umatshini wokuPrinta we-6 Umbala, Umatshini omnye wokuPrinta i-Die Lamination Machine, iGusseti ezenzekelayo ...
Indlela yokukhetha umatshini wakho yoshicilelo iingxowa ephothiweyo PP?
Kukho iintlobo ngeentlobo zoomatshini bokushicilela kwimarike, zijongeka zahlukile kakhulu ezisenza sibe nesiyezi. Ke sikhetha njani oomatshini bokushicilela abafanelekileyo kumzi-mveliso wethu? Nazi ezinye iingcebiso. Okokuqala, kufuneka sihlele oomatshini bokushicilela kwimarike, banokuba ngumatshini wokuprinta we-gravure ...
Imigca emibini eyahlukeneyo yemveliso / yeebhegi zemveliso
Zimbini iibhegi zemiyalezo / zeeleno kwimarike, zinembonakalo eyahlukileyo, ezantsi, pls. Mesh / Leno / iingxowa raschel ngu ukusika thermal ...